HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraSawirada loo Isticmaalo Qalabka Koorsada
12 / 12 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
in loo isticmaalo sida koorsada
Wasiirka Turhan, İbiş iyo Altun khudbaddiisii ​​xafiiskiisa, sanadkii la soo dhaafay, "Tkrk Telekom Tam O An" tartan sawir ah, sawirrada loo arko inay mudan yihiin soo bandhigid, ayaa sheegay in Kuliyadda Isgaarsiinta ee Jaamacadda Ankara.
Isagoo ku nuuxnuuxsaday in sawirada su'aasha la adeegsan doono ay u isticmaali doonaan sidii qalab ahaan koorsooyinka kulliyada, ayuu Turhan sheegay inay ku tala jiraan inay sameyaan tartan kaas oo ah mid dan weyn u leh ardayda iyo muwaadiniinta heer caalami ah. Turhan, "quruxda iyo qiimaha dalkeenna leh soo-bandhigista farshaxanka sawir-qaadista waxay u adeegi doontaa labadaba fanka iyo waddankeenna." Ayuu yidhi.
Turhan, shaqadii loo qabtay howsha xigta ee daawashada, kormeerka iyo qiimaynta ayaa ku dhacay, ayuu yidhi.
Matxafka, bandhigyada iyo tartamada aruurinta ayaa ah xusuusta bulshada ”
İbiş, Rector of University Ankara, wuxuu sheegay inay muhiimad weyn siinayaan horumarka dhaqan-dhaqaale ee ardaydooda iyo qalin-jabiyaya waana muhiim in kor loo qaado wacyiga dhaqanka iyo farshaxanka hoosta ka xariiqa.
İbiş wuxuu cadeeyay in marka miyirkani kaco, insaanka iyo deegaanka waa la isku dhafikaraa Bütün nashaadaadka noocan oo kale ah waa masuuliyada bulshada waxayna kaloo muhiim u yihiin wacyigalinta bulshada. Xaaladda guud, waxaan ogahay inta uu yahay Wasiirkayagu muhiimadda siinayo. Gaar ahaan waxa aad ka sameysid dadka naafada ah aad ayey muhiim ugu tahay wacyi gelinta bulshada iyo wacyi gelinta bulshada. Waa sida taxadihiisa. Tani, waxay ka dhacaysaa jaamacadda waxay fursad siineysaa dhalinyarada si ay ugu wareejiso dareenka Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhalinyaradayaga, waxayna sidoo kale wanaajin doontaa qaabka ay dhalinyarada ay u tarjumaan ugana shaqeeyaan bulshada. "
Khudbadihii kadib, Wasiirka Turhan wuxuu soo bandhigay sawirka lagusoo xulay tartankii O Tam O An ”ee Rector İbiş iyo Dean Altun.
Sawirrada Tartanka 2018
Sawirrada Tartanka 2019
Soo bandhigida hindisada: Ka daabac xaashida macluumaadka sida qoraallo daabacan oo caadi ah
Bandhiga sawirrada Malatya Garda Atatürk oo la furay
Trambus oo loo isticmaali karo gaadiidka dadweynaha ee Malatya
Tareenka xawaare sare leh oo loo isticmaalo baaskiil
Farsamooyinka Nidaamka Isgaadhsiinta Teknoolajiyada Xisaabaadka: Calaamadaha loo Isticmaalo Hubinta Ammaanka Wadooyinka
Kuliyadda Isgaarsiinta ee Jaamacadda Ankara
Tam O Sawirro Tartan 2018 ah
Tam O Sawirro Tartan 2019 ah
Tam O Sawirro